पुरुषहरु आफूभन्दा बढी उमेरका महिला नै किन ताक्छन् ?
एजेन्सी । आफ्नो विपरित लिंगप्रति सेक्सका लागि आकर्षित हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, पुरुषहरुमा देखिएको छ कि उनीहरु आफूभन्दा बढी उमेरका महिलाहरु प्रति बढी आकर्षित हुन्छन् । एक अध्ययनमा यो पत्ता लाग्यो कि महिलासँग सम्बन्ध बनाइसकेपछि बढी मानसिक र शारीरिक
नयाँ वर्षदेखि फेसबुकले ल्याउँदैछ थप सुविधा, जान्नुस् कसरी चलाउने ? न्यूज फिडमा निकै परिवर्तन हुने
काठमाडौं । संसारकै पहिलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्ना उपभोक्तालाई थप सेवा दिने तयारी गरेको छ । हाल आफ्नो मोबाइल एपका लागि टपिक बेस्ड फिड टेस्ट गरिरहेको फेसबुकले फिडमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय प्रयोगकर्ताको सुझावकै आधारमा गरिएको फेसबुकले
सेनाका जवानले महिलालाई रक्सी पिलाएर बेहोस पारेपछि…
एजेन्सी । अनुशासनको दुनियाँमा नम्बर वान मानिने सैनिक शासन र सेनाका जवानहरुले त्यो मान्यतालाई तोडेका छन् । रांचीकी एक युवतीलाई नशा लागुञ्जेल रक्सी पिलाएर भारतीय सेनाका तीन जवानले सामूहिक रुपमा शारीरिक सम्पर्क राखेका छन् । उनीहरुले रेल यात्राका क्रममा
टिप्स् : स्तनलाई उचित आकारमा सजाउने तरिका जान्नुहोस् !
एजेन्सी । तपाई सचेत हुँदा हुदै पनि कतिपय तपाईका जीवन शैली र आतदले तपाईको स्तनको स्वास्थमा गम्भीर अशर गरेको हुन सक्छ । तपाईको स्तनलाई सदा स्वस्थ र ठूलो आकारमा सजाई राख्न तपाईले तलका विषयमा ध्यान दिनुपर्छः लामो समयसम्म घोप्टो परेर नसुत्नुहोस लामो समय
फेस्टिवलमा नायिकाको पेन्टी र गोप्य अंग जब यसरी देखिए पछी ... तस्बिर सहित
लन्डन । रोम फिल्म फेस्टिवलका बेला इटालियन अभिनेत्री एवम् मोडल जाइना द्रिदी वारड्रोबले आफ्नो कपडा सम्हाल्न नसक्दा चर्चित बनेकी छिन् । उनले लगाएका कपडाहरू हावामा उडेपछि भित्री गोप्य अंगका केही दृश्य समेत देखिएका थिए । अभिनेत्री जाइनालाई आफ्ना कपडा उडेर
बन्द ल्यापटपबाट यसरी मोवाइल चार्ज गर्न सकिने
काठमाडौं । देशमा लोडसेडिङ समस्या छ। भनेको समयमा विजुली आउँदैन। यसैका कारणा मोवाइल वन्द हुने अवस्था आउँछ। कहिले काहिँ स्मार्ट फोन चार्ज गर्नको लागि विजुलीको प्लग मिल्दैन। विजुली नभएको ठाउँमा पुग्दा अर्को समस्या। यस्तो समस्यामा पनि स्मार्ट फोन चार्ज गर्ने
कुकुर झोलामा हालेर नांगिने को हुन् यी सुन्दरी ?
एजेन्सी । बेलायतको प्रसिद्ध टेबलोइड पत्रिका सनमासुन्दरीहरुले कुकुरको जीवनरक्षाका लागि कुकुरसित तस्विर खिचाएका छन् । उनीहरुले कुकुरसित खिचाएका तस्वीरहरुमा आफूलाई नङ्गाएका छन् । त्यसरी तस्विर खिचाउने पेज–३ का सुन्दरीहरुमध्ये रोजी जोन्स एक हुन्
तान्दा तान्दै यसरी देखियो केलीको भित्री बस्त्र !
एजेन्सी । हलिउडकी चर्चित ग्ल्यामर मोडल केली ब्रुकले एक कार्यक्रममा भित्री बस्त्र देखाएकी छिन् । आइतबार बेलुकी ‘स्टान्डर्ड थिएटर अवार्ड’मा सहभागी भएकी केलीले आफ्नै पहिरन तान्दा तान्दै भित्री बस्त्र देखाएकी हुन् । लण्डनको रेड कार्पेटमा उनले प्रवेश
टेलिभिजनले बनायो रोबोटलाई रिपोर्टर, पत्रकारको जागिर धरापमा
छिमेकी देश चीनको एक टेलिभिजन च्यानलले पहिलोपटक एक रोबोटलाई आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोतामा नियुक्त गरेको छ । शांघाइ ड्रयागन टेलिभिजनले जियाओआइस नामक रोबोटलाई रिपोर्टको जागिर दिएको हो । महिला पत्रकारको भेषमा रहेको यो रोबोटले विहानी पखको लाइभ शो मा
विवाहको रातमै लाखौँको गहना र उपहार लिएर दुलही भागेपछि…
टर्कीको पुलिसले आजकल एकजना लुटेरा बेहुलीको खोजी गरिरहेको छ । यी बेहुली विवाहको पहिलो रातमै लाखौँ रुपैयाँ मूल्यका गहना तथा उपहार लिएर फरार भएकी हुन् । सिरियाली आप्रवासी रहेकी यी युवकीले यसअघि पनि दुइपटक सम्म यस्तै विवाहको नाटक गरेर ठगी गरेको खुलासा भएको छ
प्रेमगीतले देखायो सुन्दर प्रकृति र मायाप्रेमको मनमोहक दृश्य, हेर्नुहोस भिडियो सहित
काठमाण्डौँ । सेतो हिमाल । ठूला ठूला पहाड । हरियो चौर । चौरमा देखिन्छन्, मायालु एक जोडी । फूलेको फापर बारी । त्यहि बारीमा रमाउँछन्, युगल जोडी । यो युगल जोडीलाई हेरी रहँदा जो कोहिको मन प्रेमील बन्छ । पे्रमको संसारमा हराउँछ । आफुलाई त्यो जोडी भित्र पाउँछ । यस्तो
'पोर्नस्टार' बिन्दु परियारले पूर्वश्रीमान विरुद्धको मुद्दा जितिन्
७५ करोड रुपैयाँ जरीवाना तिर्न अदालतको आदेश विजय घिमिरे, अमेरिका । अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डलास काउन्टी अदालतले विन्दु परियारलाई जवजस्ती यौन फिल्ममा लगाएकोमा उनका पूर्वपतिलाई दोषी ठहर गर्दै झण्डै ७५ करोड नेपाली रुपैंया (७२ लाख ५० हजार अमेरिकी